2011-06-26 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​တောင်း​ထား​တဲ့ ​ညီ​လေး ​တစ်​ယောက်​ကြောင့်​မို့ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . serial number ​ရိုက်​ထည့်​စ​ရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး . ​အ​တော်​လေး​ကို ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် . 500 MB ​ရှိ​ပါ​တယ် . Download ​လုပ်​ချင်​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ကြ​ပါ
Download Rapidshare >> Part 1 | Part2| Part 3
Download Megaupload >> Part 1 | Part2| Part 3
Download Hotfile >> Part 1 | Part2| Part 3
​သူ​က​တော့ ​ဖျက်​မိ​သွား​တဲ့ ​ဘယ်​ဖိုင်​မျိုး​ကို ​မ​ဆို ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​ယူ​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​ဒီ​အ​ခက်​အ​ခဲ​က​တော့ ​လူ​တိုင်း ​ဖြစ်​နေ​ကျ​ပါ . AT 12, FAT 16, FAT 32 and NTFS ​စ​တဲ့ file system ​အား​လုံး​နဲ့ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် ​သူ recovery ​ပြန်​ယူ​ပေး​နိုင်​တဲ့ file format ​တွေ​က​တော့ ​နည်း​တာ​မ​ဟုတ်​ဘူး . ​ရေး​ပေး​ရင် ​အ​ရမ်း​ရှည်​သွား​မှာ ​စိုး​လို့ ​မ​ရေး​ပေး​တော့​ဘူး . file type ​အား​လုံး​လို​လို​ကို ​ပြန်​ပြီး recovery ​ယူ​ပေး​နိုင်​တယ် ​လို့​ပဲ ​သိ​ထား​လိုက်​ပါ . Download ​လုပ်​ချင်​သူ​များ ​အောက်​မှာ ​ပေး​ထား​ပါ​တယ် .
aung thura : ​အစ်​ကို​ရေ epson 1390 resector software ​လေး​များ ​တင်​ပေး​လို.​ရ​မ​လား​မ​သိ​ဘူး။ ​အဲ​ဒီ​ဆော့​ဝဲ​မ​ရှိ​လို. ​အ​ခက်​အ​ခဲ​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ်။ ​နယ်​မှာ​ဆို.​တော့ ​အဲ​ဒီ​ဆော့​ဝဲ​မ​ရှိ​ရင် ​ရန်​ကုန်​သွား​သွား​လုပ်​ရ​ပါ​တယ်။
​ကို ​အောင်​သူ​ရ​ရေ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ . ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ဗျာ
​ဝါး​ပြီး​အ​ပျောက်​အ​ပျောက်​ထ​ပြီး​မှုန်​နေ​တာ​ကို ​ပြု​ပြင်​ပေး​မယ့် noise wear pro
mp.thura3@gmail.comးphotoshop plug in ​အ​နေ​နဲ. noise wear pro ​ရှိ​ရင်​လဲ​တင်​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။ ​အစ်​ကို​တင် ​ပေး​ထား​တဲ. ​နွိုက်​နင်​ဂျာ ​က​တော့ ​သုံး​ရ​တာ ​ဖ​တော်​တော်​ကို ​ကောင်း​ပါ​တယ်။
​ဒါ​က​တော့ photoshop ​နဲ့ ​တွဲ​ပြီး​တော့ ​သုံး​ရ​တဲ့ plugin ​လေး​ပါ . ​အ​ထဲ​မှာ ​အ​သုံး​ပြု​ပုံ ​အ​သုံး​ပြု​နည်း ​စာ​အုပ်​လေး​ကော . ​ကီး​တွေ​ကော ​တစ်​ခါ​တည်း ​ထည့်​ပေး​ထား​ပြီး​သား​ပါ .
​ကဲ​ဒါ​လေး​က​တော့ ​မိ​သား​စု ​ဓါတ်​ပုံ​တွေ​ကို ​ကျွန်​တော်​တို့ ​အ​နေ​နဲ့ ​အ​မှတ်​တ​ရ ​လေး​တွေ​ဖြစ်​အောင် ၊ ​ပြီး​တော့ slideshow ​လေး​နဲ့ ​မျက်​စိ​ထဲ​မှာ ​ပုံ​စံ​အ​မျိုး​မျိုး ​ပြောင်း ​တဲ့ movie ​ဖိုင်​တစ်​ခု ​ဖြစ်​လာ​အောင် ​ဖန်​တီး ​ယူ​ဖို့​ဆို​ရင်​တော့ ​အ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​တဲ့ ProShow Gold 4.5 ​ကို​သုံး​ပါ . ​သူ့​မှာ effects 280 ​ကျော်​ပါ​ဝင်​ပါ​တယ် . ​သူ​က movie ​ဖိုင်​လို့ ​ဆို​ပေ​မယ့် show biz ​လို​မျိုး​တော့ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . show biz ​ရဲ့ output movie ​ဖိုင်​က ​အ​သေ​ပါ . ​သူ​က ​ရိုး​ရိုး movie ​လို​ပဲ ​ရစ်​လို့​ရ​မယ် . ​နောက်​ကို ​ပြန်​ဆုတ်​လို့​ရ​မယ် . ​ရပ်​လို့​ရ​မယ် . ​အဲ ​ဒီ​ကောင်​လေး​မှာ​တော့ zoom ​ပါ ​ဆွဲ​လို့​ရ​မယ် . ​နောက်​တစ်​ခု rotate ​လို့​ခေါ်​တဲ့ ​ပုံ​ကို ​အ​မျိုး​မျိုး ​လှည့်​လို့​ရ​မယ် . ​ဒါ​လေး​တွေ​ပါ​ပါ​တယ် . ​ကဲ ​စမ်း​ကြည့်​ချင်​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​နောက်​ဆုံး version ​လေး ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်
​အစ်​ကို​ရေ pdf password remover ​လေး​လို​ချင်​လို့​ပါ။ mediafire ​က​လဲ ​ဆွဲ​လို့​မ​ရ​ဘူး . 4share ​က​လဲ ​ဆွဲ​လို့​မ​ရ​ဘူး . ifile.it ​လဲ ​ဆွဲ​လို့​မ​ရ​ဘူး
​ညီ​လေး​ရေ ​ကို​လဲ ​ရန်​ကုန်​မှာ ​တစ်​နှစ်​ကျော်​ကျော်​လောက် ​နေ​ခဲ့​ပါ​သေး​တယ် . mpt ​က​တော့ mediafire ​နှင့် megaupload ​ကို ​ပိတ်​ထား​ပါ​တယ် . mpt ​ကော bagan ​ကော ​နှစ်​ခု​စ​လုံး ifile.it ​ကို ​ဖွင့်​ထား​ပေး​ပါ​တယ် . ​မ​ပိတ်​ပါ​ဘူး .​သေ​ချာ ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​စမ်း​ကြည့်​ပါ​ဦး . ​အောက်​မှာ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် .
Guest "I want to Network Magic version 4.9 crack please try to search for me thank"
​ညီ​တောင်း​တဲ့ version ​က ​နဲ​နဲ ​နိမ့်​နေ​လို့ version ​မြင့်​တဲ့​ဟာ ​ရှာ​ပြီး ​တင်​ပေး ​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​သုံး​နည်း​ကို ​နောက်​အား​ရင် ​ရေး​ပေး​ပါ့​မယ် . ​အ​ခု​ဖြေ​ပေး​ဖို့ ​မေး​ခွန်း​အ​စောင် 4000 ​ကျော်​ကျန်​နေ​သေး​လို့ ​အ​ပြတ်​ဖြတ်​ပေး​နေ​ပါ​တယ် . ​သီး​ခံ​ပေး​ကြ​ပါ​ဦး .
kyawsoewin. ygn.24 : ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ကျွန်​တော့ ​တစ်​ချက်​လောက် ​ကူ​ညီ​ပေး​လို့ ​ရ​မ​လား​ခင်​ဗျာ ​ကျွန်​တော့​ရုံး​က ​စက်​တွေ​မှာ No Delete ​ဆို​တဲ့ Virus ​ဝင်​နေ​တာ ​ဘယ်​လို​မှ​သတ်​လို့ ​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် ​အစ်​ကို​အဲ့ Virus ​ကို​သတ်​လို့​ရ​တဲ့ ​ဆော့​ဝဲလ်​ရှိ​ရင် ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​သတ်​လို့​ရ​တဲ့​နည်း​ရှိ​ရင် . ​တစ်​ချက်​လောက် ​ကူ​ညီ​ပြီး ​ရှာ​ပေး​ပါ​လား​ဟင် ​ကျေး​ဇူး​အ​များ​ကြီး ​တင်​ရှိ​ပါ​တယ်။
1. Start>Run ​တွင် msconfig ​ရိုက်​ပြီး enter ​ခေါက်​ပါ။
2. Services tab ​ကို ​နှိပ်​ပြီး Services ​စာ​ရင်း​တွင် ‘windows netware work information setup keep’ ​တွင် right click ​နှိပ်​ပြီး stop ​ကို​နှိပ်​ပါ။
3. ​ထို့ ​နောက် Start>Run ​တွင် %systemroot% ​ဟု​ရိုက်​ပြီး wcybsvc.exe, wcynsvc.ocx ​ဖိုင်​များ​ကို​ဖျက်​ပါ။
​အ​ရင်​က netguide journal ​မှာ ​ဖော်​ပြ​ထား​တယ်​လို့​တော့ ​သိ​ရ​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
virus ​ကြောင့် disable ​ဖြစ်​သွား​သော Add/Remove Programs ​ဘယ်​လို Enable ​ဖြစ်​အောင် ​ပြန်​လုပ်​လဲ
Ko ​ညီ​နေ​မင်း ​ရေ ​လုပ်​ပါ​အုံး​ဗျာ။ ​ကျွန်​တော့် ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ Contro pane ​ထဲ ​က Add Or Remove Program ​ဖွင့် ​လို့ ​မ​ရ​လို့ ​ပါ။ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး​ဗျာ။
(၁) Start > Run ​မှာ regedit ​လို့ ​ရိုက်​ထည့်​လိုက်​ပါ
(၂) HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies ​အ​ထိ​သွား​ပါ .
(၃) Policies ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​လို့ ​ပုံ​ထဲ​က ​မြင်​ရ​တဲ့​အ​တိုင်း ​အ​တိုင်း NoAddRemovePrograms ​ဆို​တဲ့ ​ဖိုင်​နာ​မည်​နဲ့ ​ပေါ်​နေ​ရင် ​အဲ့​ကောင်​လေး​ကို ​ဖျက်​ပစ်​လိုက်​ပါ .
​အ​သေး​စိတ်​တော့ ​မ​ရေး​ပေး​တော့​ဘူး​နော် ​ညီ​လေး​နား​လည်​မယ်​လို့ ​ယူ​ဆ​ပါ​တယ် . ​နား​မ​လည်​ရင်​ပြော​ပါ ​အစ်​ကို ​အ​သေး​စိတ် ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​ဓါတ်​ပုံ​တွေ​နဲ့ ​တင်​ပေး​ပါ့​မယ် .
​အေး​အ​ကို ​ရေ ​ကျွန်​တော် ​ကို​တတ်​နိုင်​ရင် iobit malware fighter v1.0 ​ရဲ့ activation key ​လေး ​ပေး​ပါ​လား ​အ​ကို ​အ​မြဲ ​ကျေး​ဇူး​တင်​လျက်
​ဒါ​က​တော့ chat box ​ထဲ​က​နေ ​တောင်း​ဆို​ထား​တာ​ပါ . spyware, adware, trojans, keyloggers, bots, worms, and hijackers ​စ​တဲ့ virus ​များ​ရဲ့ ​ရန်​ကို ​ကာ​ကွယ်​ပေး​ပါ​တယ် Win XP/2000/Vista/Win7​အား​လုံး​နဲ့ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် .. ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ .​နောက်​ဆုံး ​ထွက် version ​ပါ​ပဲ . ​အောက်​မှာ download ​လုပ်​လိုက်​ပါ .
​မေး Mr com: ​အစ်​ကို ​ကျွန်​တော် ​အ​ကူ​အ​ညီ​လေး​တောင်း​ချင်​လို့​ပါ။ ​ကျွန်​တော် avira antivirus update ​ကို ​ဘယ်​နေ​ရာ ​က​နေ​ယူ​ရ​မ​လဲ ။​ပြီး​ရင် ​ဘယ်​လို ​တင်​မ​လဲ ​ပြော​ပေး​ပါ​ဦး။ ​ကျွန်​တော် ​သုံး ​တာ free ​ပါ။
​ညီ​လေး​ရေ ​ဒီ​ကို ​သွား​ပြီး​တော့ update file ​ကို ​ယူ​လိုက်​ပါ . June 24, 2011 ​ရက်​နေ့ ​အ​ထိ​ရ​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .